Indawo yokutyela Dinnerware Ihoyili | 28 iiCeramics
Yitya noHosen Zimbini Ezisibhozo, Yitya Nehlabathi
Zonke iinkcukacha ziyingcamango eyahlukileyo, ihlabathi elihlukeneyo kwiiPlati zeHosen eziveliswe ngeendlela zokuvelisa zanamhlanje.
Ukutya ngomnye wamava okugqibela azisa abapheki kunye nabantu. Sinomdla wokubona ukuba iipleyiti kunye nezitya ze-SPOT ezivela kwi-Hosen Two Eight Color Collection zibonisa lo moya ofudumeleyo kunye nomdlalo wamabhongo wabapheki.
UKUQOKELELWA KOMTHETHO - 2021 uyilo olutsha loYilo oluPhezulu loBubushushu bePorcelain Dinnerware Seti iiseti zoyilo olwahlukileyo lweCeramic kwiHotele yokutyela.
Itheyibhile eyodwa enemibala ebomvu neluhlaza, enomgangatho we-matte kunye nocwebezelayo, kunye noyilo olwahlukileyo, inokusetyenziselwa ukuhombisa kakuhle kwiitafile zakho zokutyela ngokutya. Kwaye ukwanelisa iingcinga zabapheki ezahlukeneyo.
UCOPPER BLUU-Isitayile sikaMorden Gradient Gre en Glossy Porcelain Restaurant Dinnerware Sets Iholeyili eneSiko
I-Reactive color glaze yile ngqokelela yesopt eqaqambileyo. Ukusuka kule dinnerware entsha yokutyela, iimilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu obahlukeneyo bokhetho lwakho.Ziyafumaneka kwi-dishwasher kunye ne-microwave kunye nobungqina bokukrwela.
ILOTUS BLUE-2021 iMveliso eNtsha yeBlue Porcelain Tableware iseti, Indawo yokutyela eGlikiziweyo Dinnerware yeCeramic eneSiko
Enye ye-dinnerware entsha yeceramic eluhlaza okwesibhakabhaka, ayipheleli nje ngombala wesibhakabhaka oluhlaza, kodwa idibanisa kulwandlekazi oluluhlaza. Ngeempembelelo ezibonakalayo, yenza ukutya kwakho kube mnandi kwaye kubukeka kakuhle.
IJUNGLE ELULUHLAZA-ISimbo seRustic esidumileyo seGreen Enamel seti yeCeramic Dinnerware, iBanga leAB Iiseti zePorcelain zeRestaurant.
Iipleyiti ezintsha zokutyela eziluhlaza. Isidlo sangokuhlwa esikhulu esahlukileyo ngokweemilo ezahlukeneyo, ezifumanekayo kwindawo yokutyela yaseMazantsi-mpuma yeAsia. Zihlala ixesha elide kwaye zikhuselekile kwi-dishwasher kunye ne-microwave.
Ukuba ufuna naluphi na ulungelelwaniso lombono wakho we-teableware, vumela inkonzo ye-Hosen yokwenza ngokwezifiso yenze lo mbono ube yinyani.
1. Uphando: Umthengi unikezela ngomfanekiso okanye uzobe umfanekiso malunga nombono kunye nenkcazo yedetil, ubukhulu, imathiriyeli kunye nemfuneko yokuthotyelwa.
2. Uyilo: Iqela loyilo lizoba umfanekiso we-3D ukuze uqinisekise malunga noyilo, kwaye emva koko usebenze kwiisampuli. Iqela elibandakanyekayo kwasekuqaleni kweprojekthi yokuqinisekisa ezona mveliso ziyiliweyo zilungele iimfuno zabathengi.
4. Ulawulo loMgangatho: Ukuze sithengise izakhiwo ezikumgangatho ophezulu, sigcina i-effectibe& Inkqubo yoLawulo loMgangatho esebenzayo.
Injongo yethu kukwanelisa abathengi bethu ngokuchaneka okuphezulu kunye nomgangatho othembekileyo wokuqinisekisa ukuba wonke umthengi unokuziva ekhululekile kwaye eqinisekile ngeemveliso zethu kwiitafile zabo. Iimveliso ze-Hosen ezimbini zeCeramics ezisibhozo zifumana ngokubanzi izicelo zazo kwimarike ngenxa yeprooerties.HOTEL, I-RESTAURANT, WEEDING, EVENT, SUPER MARKET.
Ingqokelela yetafile yetafile emhlophe iyahlangabezana nemfuneko yecandelo ngalinye leHotele, njengeLobby, iBuffet, indawo yokutyela eKhethekileyo, iDinning engundoqo, ibha...Qhagamshelana ngeenkcukacha ezithe vetshe
ISISOMBULULO SOKURENTSHA UMTSHATO
Ipleyiti yetshaja enegolide ekhazimlayo, isilivere inokuhlangabezana nemibuzo evela kumthengi oRentwayo ofuna lo mboniso wetafile ephucukileyo kumsitho. Ipleyiti yeTjaja yeglasi nayo iyahlangabezana nesi sicelo sikhethekileyo.
Ingqokelela yoMbala weTableware idibana nengqikelelo eyahlukileyo yendawo yokutyela, UKUQOKELELWA KOMLILO, UKUQOKELELWA KWEZIDOLOPHU, UKUQOKELELWA KWEENKUNGU...Cofa kwivenkile yokutyela eyongezelelekileyo xa uyijonga
I-Hosen Two Eight Ceramics inikezela nge-dinnerware kwi-package ehleliweyo, ngokukodwa kwi-18 pcs kwisethi nganye, i-24pcs nganye. Yipakishe kwiphakheji ekhuselekileyo kwaye uqinisekise ukhuseleko lwempahla ngexesha lokuthutha okanye ukuthengiswa kwe-intanethi.
Hosen iiCeramics ezimbini eziSibhozo njengomvelisi wetafile ukusukela ngo-1998
Ngendawo yokuvelisa iimitha ezingama-30,000, inkampani inikwe izakhono ezigqwesileyo zokuvelisa, iqela lobuchwephesha, isakhono semveliso ephezulu, ulawulo olungqongqo lwale mihla. Ngokudityaniswa kobugcisa bemveli kunye nobuchwepheshe bale mihla, iiCeramics ezimbini eziSibhozo zithobela umgaqo-nkqubo wokudala iimveliso ezintsha kunye nokulandela isimbo sobugcisa; sibonelela ngeemveliso ezigqibeleleyo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.
Sixelele nje imfuno yakho, sinokwenza okungakumbi kunokuba unokufanekisa.
Qhagamshelana neeNtengiso e-JANE LEE